Rasambatra - Site de ulrich2018 !
Indray andro niresaka i Rakivy, Ramasambomanga,Ramanantena sy Rasambatra ka toy izao ny resak'izy ireo.
Rakivy: raha izaho aloha re olona dia tena tsy mety Amiko mihintsy izany antsoina hoe fivoarana zany fa isaky ny mba te hivoatra aho na koa mba te hiezaka ny hivoatra dia tsy mety tafarina mihintsy fa toa mampakivy ahy foana na ny miresaka izany fivoarana izany aza tena tsy ho vitako mihintsy.Ka aleoko mijanona ho kivy toy izao ihany.
Ramasambomanga: eh eh eh, nareo koa zany de tsy hivoatra mihintsy ko, za aza mbola mahavita mitady vola ihany ihainana fa tsy afaka manao n'inon'inona mihintsy fa zay vola tonga eo dia lany avokoa fa betsaka loatra ny zavatra tiako hovidiana sy hananana nefa tsy mety ampy ahy izany.
Ramanantena: za kosa aloha, tsy mba toa anareo izany mihintsy ry Rakivy sy Ramasambomanga fa tena manantena foana aho fa misy zany antsoina hoe fiovana izany ary mety hampandroso ahy any amin'ny tanjona rehetra iriako ny fahaizako mandanjalanja ny tokony hataoko anio sy ny tokony hataoko rampitso.
Rasambatra: marina ny teninao ry Ramanantena, fa efa nandalo an'izao fandalovanao izao tokoa aho ary fantatro ankehitriny fa hay toy izany ny fahasambarana rehefa mahay mikiry @ zavatra tena irianao sy ilofosanao ianao, mba iriako ho toy anao avokoa ireo olona rehetra eto ambonin'ny tany.
Fa mba firifiry koa moa ny olona eto amintsika ho toy antsika sy ianao ry Rasambatra, hoy i Ramanantena Taminy, ka hoy Rasambatra namaly azy hoe: " ataoko angamba fa ireo izay mahavita mampiatra ireo tetika sy mifikitra @ tena tanjony araka ny irian'ny feon'ny fieritreretana ihany angamba, no hahavita izany ka sahy hilaza hoe " vonona aho fa hiova".